SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Waddooyingka SR 509 I-5 Jidka degdega ah iyo jidadka laga galo | WSDOT
SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Waddooyingka SR 509 I-5 Jidka degdega ah iyo jidadka laga galo
homeConstruction & planningOnline open housesSR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b)Waddooyingka SR 509 I-5 Jidka degdega ah iyo jidadka laga galo
Dhisidda maylka ugu horreeya ee SR 509 Expressway(wadada dagdagaa)iyo dariiqyada isku xidhi doona I-5 ilaa SR 509 waxay u baahan doonaan dhisitaan weyn aagga SeaTac. Qandaraaslaha WSDOT wuxuu:
Wuxuu dhisi doonaa meyl-ka koowaad ee Waddada Weyn ee dagdegaa ee SR 509 inta udhaxaysa wadada 24th Avenue South iyo I-5 iyo barta lacagta laguqaado ee elektarooniga ah (oo u dhow South 210th Street).
Waxuu dhisi doonaa buundo sare oo cusub oo wadada I-5 dulmareyso meel u dhow wadada South 212th Street. Buundada sare ayaa isku xiri doonta I-5 jihada waqooyi ilaa SR 509 Jihada waqooyi.
Waxuu dhisi doonaa dariiq cusub ka baxsan I-5 jihada koonfureed, oo koonfur ka xigta Waddada Military Rd S.
Waxuu Dhisaya dariiq cusub kaas oo isku xidhi doona koonfurta wadada SR 509 ilaa koonfurta wadada I-5.
Waxuu kuxirayaa dariiqa cusub wadada Veterans Drive iyo iswaydaarka wadada SR 516.
Hagaajintan waxay siin doontaa dadka safarka ah ee isticmaala aaggan waddo cusub oo koonfureed oo ay ku tagaan Gegida Caalamiga ah ee Sea-Tac. Waxa kale oo ay gacan ka geysan doontaa dhimista tirada baabuurta xamuulka qaada ee waddooyinka maxalliga ah maadaama darawallada xamuulku ay heli doonaan waddo cusub oo ay ku galaan bakhaarada iyo garoonka diyaaradaha.
Maxaad filan kartaa:
Inta uu dhismuhu socdo, darawaladu waxa ay filan karaan dariiqyada I-5 ee dhanka waqooyi iyo koonfur u socda in loo weeciyo dhinaca leenka xigo dibadda si ay shaqaaluhu udiyaarsadaan aag shaqo wadada I-5 dhexdeda. Darawaliintu waxay filan karaan xirnaanshaha leemanka habeenkii 2022 iyo 2023 Marka shaqaaluhu ay dajinayaan shubka buundada cusub. Marka ay dhacdo in laxidho leemanka ama haadadka, hal haad ama waqooyi ama koonfur I-5 ayaa furmi doonta saacadaha habeenkii, sida caadiga ah inta u dhaxaysa 10 p.m. iyo 4 a.m. Darawaliintu waxay sidoo kale filan karaan xidhitaanno leen kali ah iyo laba leen habeenkii inta dhismuhu socdo.
Dhismaha jidadka cusub iyo maylka ugu horreeya ee SR 509 waxa uu bilaabmayaa horraanta 2022 waxana uu socon doonaa ilaa dhamaadka 2024ka.